Multilingual Bible: Nepali New Revised Version, Psalms 113
Nepali New Revised Version, Psalms 113
1 परमप्रभुको प्रशंसा गर। हे परमप्रभुका सेवक हो, प्रशंसा गर। परमप्रभुका नाउँको प्रशंसा गर।
2 परमप्रभुका नाउँको अहिलेदेखि लिएर सदासर्वदासम्‍मै प्रशंसा भइरहोस्‌!
3 सूर्योदयदेखि सूर्यास्‍तसम्‍मै परमप्रभुको नाउँको प्रशंसा हुनुपर्दछ।
4 परमप्रभु सबै जाति-जातिहरूमा उच्‍च हुनुहुन्‍छ, र उहाँको महिमा स्‍वर्गभन्‍दा उच्‍च छ।
5 परमप्रभु हाम्रा परमेश्‍वरको समान को छ र? उहाँ, जो उच्‍च स्‍थानमा विराजमान हुनुहुन्‍छ,
6 जो आकाश र पृथ्‍वीमाथि दृष्‍टि गर्न निहुरनुहुन्‍छ।
7 कङ्गालीहरूलाई खरानीको थुप्रोबाट उहाँले उठाउनुहुन्‍छ, र दरिद्रहरूलाई घुरानबाट उचाल्‍नुहुन्‍छ।
8 उहाँले तिनीहरूलाई राजकुमारहरूसँग, र आफ्‍नै प्रजाका राजकुमारहरूका साथमा बसाल्‍नुहुन्‍छ।
9 बाँझी स्‍त्रीलाई छोराछोरीका सुखी आमाको रूपमा स्‍थिर गरिदिनुहुन्‍छ। परमप्रभुको प्रशंसा गर।